Labo ka tirsan taageerayaasha Southampton oo la xiray kaddib markii ay ku jees jeeseen xidiggii diyaaraddu la dhacday ee Sala – Gool FM
(Southampton) 10 Feb, 2019 kooxda kubadda cagta Southampton ayaa tallaabo deg deg ah ka qaadday labo ka tirsan taageerayaasheeda oo ay kaamirooyinku qabteen iyagoo ku jees jeesaya xidiggii diyaaraddu la dhacday ee Emiliano Sala.
Intii uusan bilaaban kulankii Southampton iyo Cardiff waxaa Daqiiqad aamusnaan ah loo sameeyay laacibkii Cardiff soo iibsatay ee intii uu u soo socday diyaaraddu la dhacday ee Sala, hase yeeshee 2 taageere oo Southampton ah ayay kaamirooyinka garoonku soo bandhigeen iyagoo ku jees jeesaya waxayna taagayeen gacmaha iyagoo qoslaya ulana jeeda diyaarddii dhacday.
Labadaas taageere ayaa la aqoonsaday, iyadoo booliska Hampshire ay soo xireen su’aallana weydiiyeen.
“Dhaqanka nuucaasi ah boos kuma laha ciyaarteenna, mana loogu dul qaadan doono garoonka St Mary’s” ayaa lagu yiri warbixin ka soo baxday Southampton.
Southampton waxay xustay in ay la shaqeyn doonaan booliska, si tallaabo looga qaado labadaas taageere oo muteysan doona ganaax looga joojinayo soo gelidda garoonka Southampton.